हसौराको सरस्वती नमुना माविमा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दो - नवलपुर प्रेस
हसौराको सरस्वती नमुना माविमा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दो
ज्ञानु पंगेनी ११३७ पटक पढिएको प्रकाशित मिति: २०७८ आश्विन १५, शुक्रबार (२ हफ्ता अघि)
कावासोती । कावासोती नगरपालिका चार हसौरामा रहेको सरस्वती नमुना माध्यामिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढेको पाइएको छ । जिल्लाकै सदरमुकाम भए पनि ग्रामीण क्षेत्रका रुपमा रहेको चार नं वडामा लामो इतिहास बोकेको यस विद्यालयमा अहिले एक हजार बढि विद्यार्थी अध्ययनरत रहेका छन् । कावासोती नगरपालिकामा रहेका ४० वटा सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या एक हजार भन्दा माथि रहेका तिन वटा मात्रै विद्यालय छन् । जसमध्ये एउटा विद्यालय सरस्वती नमुना मावि बनेको छ । नगरको बजार क्षेत्रमा रहेका अन्य विद्यालयलाई समेत पछि पार्दै यस विद्यालयले विद्यार्थीलाई आकर्षण गर्न सफल भएको छ । अहिले यस विद्यालयमा एक हजार ४६ जना विद्यार्थीले अध्ययनरत रहेको शुक्रबार विद्यालयमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइएको छ । विद्यालयका प्रधानअध्यापक विष्णु प्रसाद न्यौपानेले पत्रकार सम्मेलनमा विद्यालयमा नमुना विद्यालय विकास कार्यक्रम सञ्चालन भएपछि भौतिक , व्यवस्थापकीय तथा शैक्षिक गुणस्तरीय शिक्षाको विकासमा टेवा पुगेको बताउनुभयो । हिजोका दिनमा अन्य विद्यालयमा पढ्न पठाउने अभिभावकहरूले समेत अहिले विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर देखेर आफ्ना छोराछोरीलाई यसै विद्यालयमा पढ्न पठाएको उहाँको भनाई छ ।
कावासोतीको ४ , ५ नं. वडा र हुप्सेकोट गाउँपालिकाको १ र ४ नं. वडाबाट यस विद्यालयमा विद्यार्थी अध्ययन गर्न आउने गरेका छन् । अङग्रजी र नेपाली दुवै माध्यमबाट यहाँ पढाई हुने गरेको छ । अङ्गे्रजी माध्यमबाट अध्यापन सुरु भएपछि नै विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढेको प्रअ न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो । ‘न्यून शुल्कमा अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाई हुने भएपछि अन्य निजी संस्थामा अभिभावकहरूले छोराछोरी पढाउन छाड्नुभयो । यहाँका शिक्षक , विद्यालय व्यवस्थापन समिति , सामाजिक व्यक्तीत्वहरुको सहयोगबाट नै विद्यालयले शैक्षिक स्तर माथि उठाउन सफल भएको हो । सबैभन्दा बढि अभिभावकहरूको मायाले नै विद्यालय आज नमुना बन्न सफल भएको हो । ’ प्रअ न्यौपानेले भन्नुभयो । साना कक्षामा अध्ययनरत बालबालिकाको हेरचाह र सुरक्षामा विद्यालयले राम्रोसँग ख्याल राख्ने गरेको उहाँको भनाई छ । साना कक्षामा विद्यार्थीको चाँप बढी हुनुको कारणमध्ये एउटा कारण बालबच्चाको सुरक्षा भएकाले अभिभावकले अन्य निजी संस्थामा भन्दा यस विद्यालयमा पढाउन थालेको उहाँले बताउनुभयो ।
विद्यालयमा जङ्क फुड निषेध गरिएको छ । विद्यालय हाताभित्र जङ्क फुड निषेध गरिएको छ । अभिभावकलाई समेत जङ्क फुडको हानीको बारेमा जानकारी गराएर सचेत गराउने काम गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
अहिले यस विद्यालयमा ४७ जना शिक्षकले अध्यापन गर्दै आएका छन् । जसमध्ये २५ जना आन्तरिक श्रोतबाट राखिएको छ । विद्यालयको सटरको भाडा , विद्यार्थीबाट लिने न्यूनतम शुल्क , तथा विद्यालय मातहत रहेका जग्गा लगायतबाट भएको आम्दानीले आन्तरिक श्रोतका शिक्षकलाई तलब उपलब्ध गराउँदै आएको न्यौपानेले बताउनुभयो ।
यस्तै पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै विद्यालय व्यवस्थापन समितका अध्यक्ष गोपिकृष्ण शर्माले विद्यालयले प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको जानकारी गराउनुभयो । विद्यालयको भौगोलिक अवस्था अनुसार कुन प्राविधिक शिक्षा उपयुक्त हुन्छ सोही प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने गरि छलफल र तयारी अगि बढाएको उहाँले बताउनुभयो । विद्यालयमा गरीब तथा विपन्न वर्गका विद्यार्थीहरुलाई सहयोगका लागि विभिन्न व्यक्तीत्वहरुबाट अक्ष कोष समेत स्थापना गरिएको शर्माले जानकारी दिनुभयो । आफुहरु समितिमा आएपछि विद्यालयको समग्र विकासका लागि निरन्तर लागि परेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य , शिक्षक , अभिभावक तथा भवन निर्माण समिति , लेखा समितिका पदाधिकारीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।